Maamulaha Time Warner wuxuu yiri Apple waligeed kuma qatar ahayn iibsashada shirkadiisa | Wararka IPhone
Maamulaha Time Warner wuxuu ku andacooday Apple waligeed kuma qatar aheyn iibsashada shirkadiisa
Inbadan oo naga mid ah waxay kahadashay waqtiyadii lasoo dhaafay xiisaha suurtagalka ah ee Apple ee ah inay bilawdo adeeg telefishan si ay isugu dayaan inay u jabsadaan suuqa telefishanka iyo adeegyada fidinta fiidiyaha Laakiin markii aan wareegayay ilaa iyo maanta waan wali Apple wax dan ah oo dhab ah kama aysan muujin noocyadan adeegyada ah. Waqtiyadii hore waxaan ka hadalnay xiisaha Apple u qabo helitaanka Time Warner, oo ka mid ah shirkadaha horey u bixiya adeegyada telefishanka ee telefishanka sidoo kalena leh tiro badan oo xuquuqda telefishanka ah ee taxanaha iyo filimada.
Laakiin ka dib shirar badan oo aan rasmi ahayn, agaasimaha guud ee waqtiga ee Time Warner wuxuu ku andacooday in shirkadda ku taal Cupertino waligood ujeeddo dhab ah kama lahayn inay iibsadaan shirkadda. Jeff Bewkes wuxuu sheegayaa inaan kawada shaqeyneynay sidii aan isugu dayi laheyn heshiis waxtar u leh labada shirkadood, laakiin Apple waligood xiiso gaar ah umaysan muujin inay na iibsanayso ama ay gaadhayso nooc kasta oo heshiis ah, waxay umuuqataa inay kaliya dareemaysay goobta ku biirista iyo soo iibsiga.
Sanadkii la soo dhaafay, Eddy Cue wuxuu la kulmay Olaf Olafsson, madaxa istiraatiijiyadda shirkadda ee Time Warner. dhacdo aan rasmi ahayn oo qaar ka mid ah wadahadalada hordhaca ah ay ku bilaabeen danta suurta galka ah ee Apple ay ku dooneyso inay ku hesho Time Warner iyo ku habboonaanta Waqtiga Warner in lagu sii wado hawlgalkan, tan iyo muddooyinkii ugu dambeeyay, shirkadda wax soo saarku ma marayso xilliyadeedii ugu wanaagsanayd iyo sida keliya ee suuragalka ah ee saamileyda ay ku laalaadin karaan calaamadda Iibsiga.
Haddii Apple ay iibsan lahayd Time Warner, oo ah shirkad fadhigeedu yahay Cupertino waxaad si dhakhso leh ugu heli lahayd kanaallo kala duwan iyo istuudiyaha filimada, kuwaas oo ay ka mid yihiin CNN, HBO iyo Warner Bros., marin u helitaanku wuxuu si gaar ah faa'iido u yeelan karaa haddii Apple ay rabto inay madaxeeda u dhigto adduunka baahinta adeegyada fiidiyowga, adeeg xilligan u muuqda mid la dhigay illaa laga filayo taariikhda la filayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Maamulaha Time Warner wuxuu ku andacooday Apple waligeed kuma qatar aheyn iibsashada shirkadiisa
Raac Ciyaaraha Olambikada 2016 ee ka socda Brazil dalabka RTVE
Rio 2016 waxay horey u laheyd barnaamijkeeda rasmiga ah